ငှကွေေးမြားစှာ အကုနျအကခြံ ရိုကျကူးထားတဲ့ ကိုရီးယား ခတျေပျေါဒရမျမာ (၅)ကား - Lifestyle Myanmar
Home Entertainment ငှကွေေးမြားစှာ အကုနျအကခြံ ရိုကျကူးထားတဲ့ ကိုရီးယား ခတျေပျေါဒရမျမာ (၅)ကား
ကိုရီးယားဒရမျမာ စီးရီးတဈကား ရိုကျကူးမယျဆိုရငျ အခြိနျနှငျ့ ငှကွေေးမြားစှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံရသလို မီးထိုးမှနျထိုးမှအစ သရုပျဆောငျ ၊ပရိုဂြူဆာအဆုံး အပငျပနျးခံအလုပျတှအေမြားကွီး လုပျကွရပါတယျ။ ထူးခွားဆနျးပွားတဲ့ ဇာတျညှနျးတဈပုဒျရရှိဖို့၊ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ဆကျတငျတဈခုရှာဖှဖေို့၊ ဇာတျကောငျတှေ ဝတျဆငျဖို့အတှကျ ထူးခွားဆနျးပွားတဲ့ ဝတျစုံဒီဇိုငျးတှေ ရရှိဖို့အမြားကွီး ကွိုးစားကွရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒရမျမာကားကို ထုတျလုပျသူမြားဟာ တတျနိုငျသမြှ အကောငျးဆုံး အရညျအခငျြးရှိသူတှကေိုသာ ငှားရမျးပွီး ရိုကျကူးခငျြကွပါတယျ။ တခြို့ ကိုရီးယားဒရမျမာတှဟော ပရိတျသတျကို အကောငျးဆုံးတှကေိုသာ ပွသခငျြတာကွောငျ့ ဆကျတငျအပွငျအဆငျကအစ ငှကွေေး အကုနျကခြံရိုကျကူးကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး သူတို့ဇာတျကားတှဟော နိုငျငံအတျောမြားမြားအထိ အောငျမွငျနတောပဲဖွဈပါတယျ။
၁။ Are You Human Too? – $9.3 Million USD
‘Are You Human Too? ဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲဟာ အကုနျအကတြျောတျော စြေးကွီးတဲ့ ကိုရီးယားဒရမျမာကားဖွဈပါတယျ။ ဒီဒရမျမာကားက ကိုရီးယားရဲ့ ပထမဆုံး ဉာဏျရညျတု AI နညျးပညာစကျရုပျနှငျ့ လူသားတို့ရဲ့ အခဈြဇာတျလမျး ဒရမျမာကားဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါပထမဆုံးစီးရီးကို ၂၀၁၈ ဇူလိုငျမှာ လှငျ့ခဲ့ပွီး ကွီးမားသော အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ CGI နဲ့ special effects မြားက ယနမှေ့ာ စြေးအကွီးဆုံး ကဒေရမျမာမြားထဲက တဈခုအဖွဈ ပွသစခေဲ့ပါတယျ။
၂။ Iris2– $18.5 Million USD
‘Iris2ဇာတျလမျးတှဲဟာ နာမညျကွီး’Iris ကိုရီးယားဒရမျမာစီးရီးရဲ့ နောကျဆကျတှဲဇာတျလမျးဖွဈပါတယျ။ 2013မှာ နောကျဆကျတှဲဇာတျလမျးကို ထုတျလှငျ့ခဲ့ပွီး ထုတျလုပျဖို့ ပိုကျဆံအမြားကွီး ကုနျကခြဲ့ပါတယျ။ ပွသထုတျလှငျ့နတေဲ့ အခြိနျမှာ ရုပျရှငျရိုကျကူးမှုဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၈ သနျးဝနျးကငျြ ကုနျကခြဲ့ပါတယျ။ ဒီဒရမျမာစီးရီးတဈကားလုံး ရိုကျကူးနတေဲ့ ကာလပတျလုံး သုံးစှဲခဲ့တဲ့ ငှပေမာဏဟာ မွငျရဖို့ရှားပါးခဲ့ပါတယျ။ ဒီဒရမျမာကားမှာ ပါဝငျတဲ့ သရုပျဆောငျတှကေလညျး နာမညျကွီးသူတှခေညျြး ဖွဈတာကွောငျ့ ဒါက ထုတျလုပျမှုက ဘာ့ကွောငျ့စြေးကွီးခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျးထဲက တဈခုဖွဈပါလိမျ့မယျ၊ ဒါ့အပွငျ ဒရမျမာမှာ ဖနျတီးဖို့ ဘတျဂကျြအမြားကွီး ကုနျကသြော action scenes တှအေမြားကွီးပါဝငျပါတယျ။
၃။ Kingdom – $18.5 Million USD
Kingdom လို့လူသိမြားတဲ့ ဖုတျကောငျသညျးထိတျရငျဖို Kဒရမျမာကားဟာ Netflix ရဲ့မူရငျးစီးရီးဖွဈပွီး Ju Jihoon, Ryu Seung Ryong, နဲ့ Bae Doona တို့သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ အဆိုပါရုပျရှငျဟာ အလယျခတျေ ဂြိုဆှနျမငျးဆကျကို အခွတေညျပွီး ဒီဇိုငျးတှကေို အကုနျအကခြံရိုကျကူးခဲ့ကွပါတယျ။ ထုတျလုပျသူမြားဟာ ဒီစီးရီးထုတျလုပျဖို့အတှကျ ဘတျဂကျြအလှနျအကြှံသုံးပွီး ရိုကျကူးခဲ့ကွတာပါ။ episode တဈခုစီအတှကျ ထုတျလုပျမှုကို ဒျေါလာ 1.76သနျးကြျောသုံးစှဲခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီစီးရီးရဲ့ positive reviews မြားကွောငျ့ ဒုတိယပိုငျးကို ရိုကျကူးဖို့ ပွငျဆငျနပွေီး 2020 မှာ ထုတျလှငျ့သှားပါလိမျ့မယျ။
၄။ Vagabond – $23.2 Million USD
‘Vagabond’ဆိုတဲ့ ဇာတျကားဟာ လူကွိုကျမြားပွီး ပရိတျသတျတှကွေားမှာ နာမညျကွီးတဲ့ အကုနျအကအြမြားဆုံး ဒရမျမာတဈကားဖွဈပါတယျ။ ဒီဒရမျမာကားမှာ Miss A’ အဖှဲ့ဝငျ Suzy, မငျးသား Lee Seunggi, နဲ့ Shin Sungrok တို့လို ကိုရီးယားဖြျောဖွရေေးက နာမညျကွီးသရုပျဆောငျတှခေညျြးပဲ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ ဇာတျကွောငျးကတာ့ သူပါဝငျခဲ့တဲ့ လယောဉျတဈစီးရဲ့ ပကျြကမြှုနောကျကှယျက အမှနျတရားကို ဖုံးကှယျဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ နိုငျငံတကာ အကငျြ့ပကျြခွစားသော အမှုတှကေို တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ အမြိုးသားတဈဦး(Lee Seunggi)ကို ဗဟိုပွုထားတာပါ။ မျောစကိုနှငျ့ ပျေါတူဂီတို့လို နရောအမြိုးမြိုးမှာ ရိုကျကူးခဲ့တာကွောငျ့ ဒီဒရမျမာထုတျလုပျမှု ကုနျကစြရိတျက အရမျးမွငျ့မားခဲ့ပါတယျ။
၅။ Mr. Sunshine – $34.3 Million USD
Mr. Sunshine’ဇာတျလမျးတှဲဟာ မကွာသေးမှီက ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ စြေးအကွီးဆုံး kဒရမျမာတှထေဲက တဈကားဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါဒရမျမာကို 2018 ဇူလိုငျလ ၇ရကျနကေ့ ပထမပိုငျး ထုတျလှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒရမျမာကားရဲ့ ထုတျလုပျမှုကုနျကစြရိတျဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ အကွမျးဖငျြး ၃၄သနျးကြျောဖွဈတဲ့ ဝမျသနျး ၄၀ကို ရောကျရှိခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ စီးရီးရဲ့ တဈပိုငျးစီဟာ ထုတျလုပျဖို့ ဝမျ၁.၆သနျး(အမရေိကနျဒျေါလာ ၁.၃သနျး)ခနျ့ ကုနျကခြဲ့ပါတယျ။ ဒီဒရမျမာကားက ဘာ့ကွောငျ့ စြေးကွီးရတာလဲဆိုတော့ ကိုရီးယားခတျေကာလ အပိုငျးအခွားကို ဆကျတငျပွငျဆငျပွီး ရိုကျကူးတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ production အဖှဲ့ဟာ ခတျေနဲ့ လုံးဝကိုကျညီဖို့ ဝတျစုံတှနေဲ့ ဆကျတငျကို ပွနျလညျဆနျးသဈခဲ့ရပါတယျ။
ငွေကြေးများစွာ အကုန်အကျခံ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကိုရီးယား ခေတ်ပေါ်ဒရမ်မာ (၅)ကား
ကိုရီးယားဒရမ်မာ စီးရီးတစ်ကား ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင် အချိန်နှင့် ငွေကြေးများစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသလို မီးထိုးမှန်ထိုးမှအစ သရုပ်ဆောင် ၊ပရိုဂျူဆာအဆုံး အပင်ပန်းခံအလုပ်တွေအများကြီး လုပ်ကြရပါတယ်။ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ဇာတ်ညွန်းတစ်ပုဒ်ရရှိဖို့၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆက်တင်တစ်ခုရှာဖွေဖို့၊ ဇာတ်ကောင်တွေ ဝတ်ဆင်ဖို့အတွက် ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေ ရရှိဖို့အများကြီး ကြိုးစားကြရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒရမ်မာကားကို ထုတ်လုပ်သူများဟာ တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး အရည်အချင်းရှိသူတွေကိုသာ ငှားရမ်းပြီး ရိုက်ကူးချင်ကြပါတယ်။ တချို့ ကိုရီးယားဒရမ်မာတွေဟာ ပရိတ်သတ်ကို အကောင်းဆုံးတွေကိုသာ ပြသချင်တာကြောင့် ဆက်တင်အပြင်အဆင်ကအစ ငွေကြေး အကုန်ကျခံရိုက်ကူးကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူတို့ဇာတ်ကားတွေဟာ နိုင်ငံအတော်များများအထိ အောင်မြင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
‘Are You Human Too? ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ အကုန်အကျတော်တော် ဈေးကြီးတဲ့ ကိုရီးယားဒရမ်မာကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒရမ်မာကားက ကိုရီးယားရဲ့ ပထမဆုံး ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာစက်ရုပ်နှင့် လူသားတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း ဒရမ်မာကားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပထမဆုံးစီးရီးကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင်မှာ လွှင့်ခဲ့ပြီး ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ CGI နဲ့ special effects များက ယနေ့မှာ ဈေးအကြီးဆုံး ကေဒရမ်မာများထဲက တစ်ခုအဖြစ် ပြသစေခဲ့ပါတယ်။
‘Iris2ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ နာမည်ကြီး’Iris ကိုရီးယားဒရမ်မာစီးရီးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 2013မှာ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွင့်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်ဖို့ ပိုက်ဆံအများကြီး ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ပြသထုတ်လွှင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းဝန်းကျင် ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒရမ်မာစီးရီးတစ်ကားလုံး ရိုက်ကူးနေတဲ့ ကာလပတ်လုံး သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ငွေပမာဏဟာ မြင်ရဖို့ရှားပါးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒရမ်မာကားမှာ ပါဝင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း နာမည်ကြီးသူတွေချည်း ဖြစ်တာကြောင့် ဒါက ထုတ်လုပ်မှုက ဘာ့ကြောင့်ဈေးကြီးခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါ့အပြင် ဒရမ်မာမှာ ဖန်တီးဖို့ ဘတ်ဂျက်အများကြီး ကုန်ကျသော action scenes တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။
Kingdom လို့လူသိများတဲ့ ဖုတ်ကောင်သည်းထိတ်ရင်ဖို Kဒရမ်မာကားဟာ Netflix ရဲ့မူရင်းစီးရီးဖြစ်ပြီး Ju Jihoon, Ryu Seung Ryong, နဲ့ Bae Doona တို့သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ဟာ အလယ်ခေတ် ဂျိုဆွန်မင်းဆက်ကို အခြေတည်ပြီး ဒီဇိုင်းတွေကို အကုန်အကျခံရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူများဟာ ဒီစီးရီးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ဘတ်ဂျက်အလွန်အကျွံသုံးပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ကြတာပါ။ episode တစ်ခုစီအတွက် ထုတ်လုပ်မှုကို ဒေါ်လာ 1.76သန်းကျော်သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီစီးရီးရဲ့ positive reviews များကြောင့် ဒုတိယပိုင်းကို ရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီး 2020 မှာ ထုတ်လွှင့်သွားပါလိမ့်မယ်။
‘Vagabond’ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ လူကြိုက်များပြီး ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အကုန်အကျအများဆုံး ဒရမ်မာတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒရမ်မာကားမှာ Miss A’ အဖွဲ့ဝင် Suzy, မင်းသား Lee Seunggi, နဲ့ Shin Sungrok တို့လို ကိုရီးယားဖျော်ဖြေရေးက နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေချည်းပဲ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်ကြောင်းကတာ့ သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ လေယာဉ်တစ်စီးရဲ့ ပျက်ကျမှုနောက်ကွယ်က အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် နိုင်ငံတကာ အကျင့်ပျက်ခြစားသော အမှုတွေကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦး(Lee Seunggi)ကို ဗဟိုပြုထားတာပါ။ မော်စကိုနှင့် ပေါ်တူဂီတို့လို နေရာအမျိုးမျိုးမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့် ဒီဒရမ်မာထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်က အရမ်းမြင့်မားခဲ့ပါတယ်။
Mr. Sunshine’ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ မကြာသေးမှီက ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး kဒရမ်မာတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဒရမ်မာကို 2018 ဇူလိုင်လ ၇ရက်နေ့က ပထမပိုင်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒရမ်မာကားရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ အကြမ်းဖျင်း ၃၄သန်းကျော်ဖြစ်တဲ့ ဝမ်သန်း ၄၀ကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စီးရီးရဲ့ တစ်ပိုင်းစီဟာ ထုတ်လုပ်ဖို့ ဝမ်၁.၆သန်း(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၃သန်း)ခန့် ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒရမ်မာကားက ဘာ့ကြောင့် ဈေးကြီးရတာလဲဆိုတော့ ကိုရီးယားခေတ်ကာလ အပိုင်းအခြားကို ဆက်တင်ပြင်ဆင်ပြီး ရိုက်ကူးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ production အဖွဲ့ဟာ ခေတ်နဲ့ လုံးဝကိုက်ညီဖို့ ဝတ်စုံတွေနဲ့ ဆက်တင်ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခဲ့ရပါတယ်။
Previous articleသူမရဲ့ နစေ့ဉျမိခငျဘဝပွဿနာတှကေို ရုပျပုံလေးတှနေဲ့ သရုပျဖျောခဲ့တဲ့ ကလေး (၄)ယောကျမမေေ
Next articleသငျ့ရဲ့အခဈြတှကေို ခဈြသူကဘယျလောကျအထိ တနျဖိုးထားသလဲဆိုတာ သိရှိနိုငျမယျ့ အခကျြ ၁၀ ခကျြ
သငျ့ရဲ့တီထှငျဖနျတီးနိုငျမှုစှမျးရညျကို ပတျဝနျးကငျြနဲ့အသိုငျးအဝိုငျးက ဘယျလိုမြိုးဖကျြဆီးနလေဲဆိုတာ မီးမောငျးထိုးပွနတေဲ့ ဇာတျလမျးတိုလေး